चौतर्फी घेराबन्दीले सिटमा दोस्रो देखिए पनि समग्रमा एमालेको जनमत बढेको छ : नेम्बाङ
बुधबार, असार २२ २०७९ ०७:०५ PM
शनिबार ७ जेठ २०७९ ०५:५४ PM
यो त जनमतले नै देखाइसक्यो त ? देखाएन र ? एमालेलाई सारा घेराबन्दी गरेर गठबन्धन गरेर जानु भनेको सुरूमा नै राजनीतिक रूपमा पराजय हुनु हो । त्यसले पनि नपुगेर कुनै पनि पार्टीका सभापति होइन, प्रधानमन्त्री स्वयंले आमसभामार्फत् गठबन्धनलाई जिताउनु जनताको कर्तब्य हो भनेर भाषण गर्नुभयो । एउटा देशका प्रधानमन्त्रीले यसो भन्न मिल्छ ? तर, निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत गठबन्धनलाई जिताउन जनतालाई दबाब दिनुभयो ।
खासमा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट भन्नुपर्ने कुरा यति मात्र थियो– स्थानीय तहको निर्वाचनमा डर, त्रास र भयरहित भएर स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफूले रोजेको पार्टीलाई जिताउनुहोस् भनेर आह्वान गर्नुपर्दथ्यो । तर, उहाँले त्यसो नभनेर गठबन्धन आबद्ध दललाई जिताउनु जनताको कर्तब्य हो भनेर गठबन्धनको पक्षमा मत माग्नुभयो । देशको अभिभावक मानिएको प्रधानमन्त्रीले यसो भन्न मिल्छ ? तर, उहाँले निर्वाचनको दौरानमा मन परेका पार्टी रोज्न पाइँदैन, जसरी पनि गठबन्धनलाई मत दिनुपर्छ भन्ने आशयसहित पदीय मर्यादा नै भुलेर निर्वाचनमा जानुभयो । कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले संसारमा यसरी मत माग्छन् । मैले चाहिँ त कहीँ कतै थाहा पाएको छैन ।
प्रतिगमन के हो ? हाम्रो पार्टी अध्यक्षले नयाँ जनमतका लागि भन्दै निर्वाचनको मिति नै घोषणा गरेर जानुभएको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरिदियो । एकपटक त परमादेशबाट नै । तर, पनि हाम्रो पार्टीले कानुनी राज्य बलियो बनाउनुपर्छ भनेर त्यसलाई सहर्ष स्वीकार ग¥यो । चुनावमा गयो । के ओलीजीले मात्रै संसद बिघटन गरेको हो र ? त्यसअघि गिरिजाबाबुले पनि संसद् विघटन गर्नुभएको थियो । मनमोहनजीले पनि संसद् विघटन गर्नुभएको थियो । सूर्यबहादुर थापाले पनि संसद् विघटन गर्नुभएको थियो । यो मुलुकमा ६/६ पटक संसद् विघटन भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याएको नजिर पनि छ । तर, ओलीजीले गरेको संसद् विघटन चाहिँ प्रतिगमन ? अनि अरूले गरेको चाहिँ अग्रगमन ? यो त राजनीतिक खपतका लागि बोलिएको विषय मात्रै हो ।
योभन्दा केही अरू देख्नुहुन्छ । त्यसपछि यो पनि बिर्सन हुन्न कि ओलीजीले गरेको संसद् विघटनलाई प्रतिगमन भन्नेहरू आफैं पुनः विघटन गर्न नलागेका होइनन् र ? स्थानीय तह निर्वाचन सारेर सङ्घीय संसद्को निर्वाचन गरौँ भन्ने प्रस्ताव पनि नगरेका होइनन् र ? के संसद् विघटन नगरी सङ्घीय संसद्को ‘अर्ली इलेक्सन’ हुनसक्थ्यो र ? त्यसैले संसद् विघटनको प्रस्ताव त सर्वोच्चको परमादेशबाट पछि पनि सत्तारूढ दलबाट आएको हो । हामीले बरु त्यसको ठाडो प्रतिवाद गर्यौँ, कि संसद् विघटन गरे ‘अर्ली इलेक्सन’ मा जाने सत्तारूढ दलको चाहनालाई अवरोध गरेर मुलुकलाई स्थानीय तहको निर्वाचनतर्फ होमायौँ । त्यसैले उनीहरूले गरे प्रतिगमन नहुने र अग्रमन हुुने अनि हामीले गरेर प्रतिगमन हुने ? यो त राजनीतिक खपतका लागि बोलिएको विषय मात्रै हो । यसमा कुनै तुक छैन ।